XOG: Madaxweyne Farmaajo Walaalkiis Oo Lacag badan bixinaya Magaalada… | Somalia News
XOG: Madaxweyne Farmaajo Walaalkiis Oo Lacag badan bixinaya Magaalada…
Wararka Doorashada Soomaaliya ayaa ah wax aad loo hadal hayo,iyadoo olole ballaaran laguda galay.
Sida la ogaaday Madaxweynaha Dalka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa dejiyey Naqshad uu ku doonayo dib usoo laabashadiisa.
Xasan Cabdullaahi Farmaajo ayaa la dhashay Madaxweyne Farmaajo waxaana loo xilsaaray shukaaminta xildhibaanada imaan doona.
Liis ayaa jira oo xildhibaanada imaan doona la rabo in Madaxweyne Farmaajo ucod siiyaan kuwaas oo hadda lala sii heshiinayo.
Warar ayaa sheegaya in Xasan Cabdullaahi Farmaajo ayaa lacag badan geeyey Baydhabo si ololahooda unajaxo.
Xasan Farmaajo ayaa maalmo ka hor gaaray Baydhabo Caasimada Koonfur Galbeed Soomaaliya.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la kulmaya cadaadis xoog leh iyadoo murashaxiin badan ay raadinayaan in iyagu guuleystaan.
Previous articleAgaasimaha IMF “Afrika Waa in Laga Caawiyaa Dhaqaale Xumada uu Sababay COVID-19”
Next articleHalyeey Liverpool ah oo u digay kooxda Everton ka hor kulanka Merseyside derby